eCADLite: Enye indlela eya kwiMicrostation -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/eCADLite: Enye indlela eya kwi-Microstation
Ifomathi ye-dgn izinzile kakhulu, iinkqubo ezininzi ze-GIS / CAD ziyayiqonda, kodwa ukuyihlela ngokwendalo bekusoloko kulilungelo leMicrostation, nangona kuye kwakho umahluko kathathu kuphela kwifomathi: IGDS, V7 kunye neV8.
Kwimeko yefom ye-dwg, i-Microstation iye yakwazi ukuyivula nokuyihlela ngokwenene, kunye nazo zonke iiprogram ezalwa phantsi komgca IntelliCAD. Kodwa ifomathi ye-dgn, inyani yokuba iMicrostation yisoftware enabaxhasi abancinci ngokuthelekiswa ne-AutoCAD, zimbalwa kakhulu izicelo eziye zabonwa, ukusukela oko ubuhlohli beprojekthi Pangea abaxhomekeke ngakumbi ukuba "benze izinto" kunye neefayile ezigqithisileyo kodwa ukuba bangazakheli idatha ngendlela eqhelekileyo.
I-eCADLite yenye yezo zinto, isisombululo esakhiwe ngumntu owayesakuba ngumdibanisi kunye neBentley, eyakhiwe phantsi kwekhowudi yePangea. Nangona kunjalo, umsebenzisi we-Microstation akangethandi kakhulu okusingqongileyo, umda kwaye usebenza kuphela ngemilinganiselo emibini; kodwa yenye yeenkampani ezingazukuxhaphaza ngaphezulu kwe-20% yamandla eMicrostation, inguqulelo yayo ethe "khanyayo" engangeni ngaphantsi kwe- $ 1,000 (i-PowerDraft).
eCADlite kwakhululwa kunyaka 2000, kodwa isebenza iifomati V8, kubonakala ezininzi iimpawu zayo ukuze ibe V7 interface, kodwa ezinye izinto imgqale ayifanelwe:
Kubukeka njenge Windows
Njengoko benditshilo, umsebenzisi okhethekileyo weMicrostation usenokungayithandi le nto, kodwa umntu ofuna ukuhlela iifayile ze-dgn kwaye uqhelene neWindows unokuyifumana inomdla. Kwaye iMicrostation iyaqhubeka nokugcina "eyayo imihlangano" ekusebenziseni ii-icon ezihlala zisoyikisa umsebenzisi omtsha, nangona ukuzigcina ngokungaguqukiyo kuye kwanceda ukugcina ukuthembeka kugxila kutshintsho kubuchule ngaphambi komdibaniso.
Jonga umzobo osekunene, ukuba ii icon zeOfisi yesiqhelo zihlanganiswe njani nemiyalelo yeMicrostation. hehe
Iphucula i-Microstation eyona mbi kakhulu
Ayisiyonto enkulu leyo, kodwa umyili we-eCADLite waqala ukucinga ngezinto ezenziwa kakuhle yiMicrostation kodwa ngendlela engaqhelekanga. Umzekelo woku kuprinta, nangona kutshanje kuphuculwe ukusuka kwiXM, uninzi lwethu lukhetha ukwakha ubeko kwiAutoCAD; naye Ukuphathwa kweebhloko (iiseli) ezinokuhlelwa ngokuthe ngqo kunye nemeko yokuhamba okungcono, kunye nento oyithethayo malunga nobungakanani: i-eCADLite iyisebenzisa ngendlela efanelekileyo. Nokuba umgca obomvu unamathuba amaninzi okwenza umboniso kunye neempawu zolawulo.
Hlela ukuguqa ngokukodwa
Nangona i-dgn iyifomathi ezinzileyo ekuhambeni kwexesha, i-AutoCAD ide inguqu yayo yamva nje ibandakanye ukhetho lokungenisa ngaphakathi kwi-dwg. I-eCADLite inokufunda zombini i-V7 kunye ne-V8 dgn, nangona kungamacala amabini kuphela. Unokubhekisa kwakhona kwi-dwg, dxf, kunye neefayile ze-raster.
Iifayile ze-dgn, iimpirithi zokuprinta kunye ne-redlines zingakhiwa phantsi kweeprojekthi zefayile ze-axp zokulawula okungcono.
Ixabiso liya ku-$ 300, ngaphandle kweCADLite kukho ezinye izicelo zeGraphStore, ezinika enye uhlobo lwezinto ezinokwenzeka, njenge:
Asset2000. Le yimeko efana nokusebenza kweProjekthi yeWindowsWise (kodwa kwisigxina), apho ungenza khona amaqhinga afana nokudibanisa idatha ye-vector kwiinkcukacha zolwazi, ukulinganisa okanye ukudibanisa iifayile zangaphandle.
AssetX. Oku kunokusebenza kweAsethi, kodwa ukongeza kuba isebenza nge-ActiveX inokudityaniswa kwiwebhu okanye uphuhliso lwayo kwamanye amaqonga.
I-eCADLite inokukhutshelwa kwiwebhusayithi yeGraphStore njengenguqulo yovavanyo. Nangona ikhowudi yokuvula ihambile kade.